Juunyo | 2015 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2015
BARO CIMRIGA NABIYADII ALLE SOO DIREY (CALAYHIMA SALAATU WA SALAAM)
Juunyo 30, 2015
WAAJIDPRESS – 30 JUN 2015:
Madaxweynaha Somalia oo maanta hortagay Baarlamaanka dalka
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qaybgalay kulan Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia ay ku leeyihiin xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia hortooda Khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay arimaha guud ee xaalada dalka Somalia.
Madaxweynaha wuxuu soo hadal qaaday arimaha Maaliyada dalka, wuxuu sheegay in Wasaarada Maaliyada Somalia ay ku tilaabsatay horumaro kala duwan oo ku aadan maareynta dhaqaalaha dalka iyo habka Electroniga.
Sidoo kale Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday in Dowladda Somalia ay ku mashquulsan tahay soo nooleynta shilinka Somalia.
Mar uu ka hadlaayay Gobolada dalka Somalia loo gaarsiiyay Federalka ayuu ku tilmaamay wax wanaagsan, waxaana uu sheegay inay dhismeen Maamulo kala duwan oo Federaal ku yimid.
Ka qaybgalka Madaxweynaha uu maanta ka qaybgalay Fadhiga Baarlamaanka ayaanan horay loo sii shaacin, waxaana tani ay u muuqata qayb ka mid ah olalaha Madaxweynaha uu ku doonaayo inuu ku soo jiito Xildhibaanada Baarlamanka Somalia oo ku kacsan.
Sidoo kale Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa go’aansaday in maanta loo codeeyo Guddiga doorashooyinka Qaranka iyo Guddiga xuduudaha iyo Arimaha Federalka, waxaana codeynta ay tahay mid qarsoodi ah.
Ammaanka Xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho, ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana amniga sugaya ciidamada Nabad Suggida, Booliska iyo ciidanka Boliska Amisom, iyadoo ay xiran yihiin wadooyinka xarunta Madaxtooyada agmara.
Muuqaal: Maamada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Maanta La Gaarsiiyay Deeq Isugu Jirtay Lacag Iyo Raashin
Walaalaha Koonfur Galbeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa maanta Deeq isugu jirtay Lacag iyo Raashin gaarsiiyay Maamada Koonfur Galbeed Soomaaliya Xabiiba Ibraahim Xasan oo ah Maamada dhashay Mujaahidkii Koonfur Galbeed Xasan Aadan Keerow -(oo ahaa wiilkii ugu horeeyey ee u dhinta DOWLAD a Goboleedka Lixda Gobol EE Koonfur Galbeed ee Baydhabo). DAAWO:
War deg deg ah: Magacyada iyo beelaha gudiga doorashooyinka qaranka ee 2016 iyo sida loo kala keensaday (Xog)
WAAJIDPRESS – 30 JUNE 2015:
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey guddiga doorashooyinka qaranka ee 2016, oo ka kooban 9 xubnood. Marka laga reebo magacyadooda wax xog ama aqoon dheeri ah looma lahayn xubnahaas, inkasta oo magacyada qaar la aqoonsan karay. Haddaba waxaan halkan idin kugu soo gudbineynaa beelaha ay kasoo kala jeedaa xubnahaas iyo siyaasiyiinta kala keensaday. Hoos ka aqriso:
3- Xuseen Cabdi Adan – Wuxuu u dhashay Beesha Mareexaan, waa shaqaale dawladeed oo wuxuu agaasime ka yahey wasaaradda amniga, wuxuuna xiriirka caalamiga ah u qaabilsan yahey xisbiga PDP ee Madaxweyne Xasan, wuxuu hadda yahey Madaxa Ololaha Musharax Cabdi Kariim Guuleed.
4- Saciid Cali Sheekh Maxamed – Waa Digil iyo MIRIFLE, Wuxuu soo noqdey Wasiir, waxaa keensadey Shariif Xasan Sheekh Aadan.
5- Dr. Maxamed Axmed Nuur – Waa Digil iyo Mirifle , Wuxuu madax KA yahay Bank ku yaala Imaaraadka, waxaa keensadey Faarax C/qaadir , waa Damu-Jadiid.
6- Cabdiraxmaan Cusmaan Dirir – Gadubiirsi, waxaa keensaday Wasiirka Arimaha Dibada Cabdisalaam Hadliye, wuxuu soo noqdey xildhibaan, iyo wasiir ku xigeenkii maaliyadda dawladdii Cabdullaahi Yusuf.
7- Maxamed Daahir Maxamuud – Waa Ciise, waxaa keeney Wasiir ku xigeenka Maxamed Cali Xagaa , waa xildhibaan hore.
8- Khadiijo Cosoble – Waa Warsangali Abgaal, waxey la dhalatey Cabduqaadir Cosoble, waxeyna ka danbeysey inuu Madaxweyne u tartamo sanadkii 2012.
9- Xaliimo Yareey – Waa Ceyr, Habargidir, waa siyaasad ku xiran Damu-Jadiid, waxaa lagula heshiiyay in laga dhigi doono Gudoomiyaha ama Gudoomiye ku xigeenka gudigga doorashadda maadama ay hada tahay Gudoomiyaha gudigga farsamadda shirka Galmudug ee Cadaado ka socda, waxa ay ku hadashaa luqadaha MAAY MAAY IYO MAXAA.
Ciidanka Militariga Itoobiya oo gaaray Deegaanka Leego
Ciidan xoogan oo ka tirsan Ciidanka Militariga Itoobiya, ayaa waxay gaareen Deegaanka Leego ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo Jimcihii khasaaro xoogan loogu gaystay Ciidanka Burundi ee qaybta ka ah Amisom.
Ciidanka Militariga Itoobiya oo watay gaadiidka gaashaaman ee dagaalka, ayaa waxay casir liqii Isniintii ay gaareen Deegaanka Leego, iyagoona xalay ku hoyday Deegaankaasi, waxaana la arkaayay iyagoo isku ballaarinaaya Leego.
Ciidanka Itoobiya oo ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Somaliya, ayaa waxay bilaabeen inay fariisimo ka samaystaan Leego, sidoo kalana waxay saldhigteen Xeradii Ciidanka Burundi ku lahaayen halkaasi.
Dad kooban oo ku haray Deegaanka Leego, ayaa waxay sidoo kale inoo xaqiijiyen Ciidanka Itoobiya inay dafaacyo ka sameysteen laba goobood, oo ka baxsan Xerada Leego, ayna suurta gal tahay inay fariisimahoodu kordhiyaan.
Habeenkii Axada, ayaa waxay Ciidankan ku hoydeen Deegaanka Buulo Jameeco, oo qiyaastii 20km u jirta Degmada Buurhakaba ee Gobolka Baay, halkaasoo ayna kaga soo dhaqaaqeen Leego.
Sarkaal ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa Dhacdo.com u sheegay Ciidanka Itoobiya inay wataan hub waaweyn, oo qayb ay ka yihiin madaafiicda goobta, qoriga ridada dheer BM-ka iyo taangiyo.
Sarkaalkan, ayaa ku waramaaya Ciidanka Itoobiya in loo arko inay difaaci karaan Xerada Amisom ee Leego, inkastoo Ciidanka Itoobiya ay 11-kii bishan uu khasaaro ballaaran ka soo gaaray, dagaalkii ay Shabaabka kula galeen Deegaanka Buulo Jameeco.
Leego oo ka tiran Degmada Wanlaweyn, ayaa waxay muhiim u tahay wadada xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, si aynaan halis ugu imaan saadka Ciidanka Amisom ee Gobolka Baay.
DAAWO: PUNTLAND OO “KAB” KU GARAACAYA SAWIRADA MADAXWEYNE XASSAN , GUDOOMIYE JAWAARI IYO NICHOLAS KAY
Juunyo 29, 2015
WAAJIDPRESS – 29 JUN 2015:
Magacyada iyo Guddiga Doorashooyinka Madaxweynaha Galmudug oo maanta Cadaado lagu doortay
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug, ayaa maanta magaalada Cadaado waxa ay ku doorteen Guddiga doorashooyinka Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, kadib kulan ay isugu yimaadeen Xildhibaanada Maamulka Galmudug.
Fadhiga Xildhibaanada waxaa soo xaadiray oo goobjoog ahaa Xildhibaano gaaraya 77 Xildhibaan, iyadoo doorashada Guddiga ay noqotay mid gacan taag ah.
73 ka mid ah Xildhibaanada ayaa waxa ay cod gacan taag ah ugu codeeyeen sagaal Xubnood oo loo doortay inay noqdaan Guddiga doorashooyinka Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee Maamulka Galmudug 3 Xildhibaan ayaa ka aamusay 1 Xildhibaana wuu diiday.
Magacyada Guddiga Doorashooyinka ayaa kala ah
1:Maxamuud Aadan Cismaan Guddoomiye
2:C/wali Cali Maxamuud Xoghayn
3:Maxamed Xasan Geelle Xubin
4:Farxiyo Xasan Cali Xubin
5:Xasan Maxamed Axmed Xubin
6:Farxiyo Cabdulaahi Shiikh Doon Xubin
7:Canab Maxamed Cosoble Xubin
8:Maxamed Mire Axmed Xubin
9:C/qaadir Cali Diirshe Xubin
Sagaalkaan xubnood ayaa waxa ay kasoo shaqeyn doonaan Doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo balanta ay tahay inay dhacdo 04 Bisha soo socota ee July.
War deg deg AH: Xeer Ilaaliyaha Guud ee dalka Masar oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Qaahira
Xeer Ilaaliyaha Guud ee dalka Masar ayaa ku dhaawacmay qarax bam oo lagu weeraray gaadiid uu watay magaalada Qaahira.
Hisham Barakat ayaa la sheegay in dhaawac kooban uu ka soo gaaray qaraxa, waxaana la xaqiijiyay in labo ka mid ah Ilaaladiisa ay dhaawacmeen.
Xeer Ilaaliyaha ayaa dhowr jeer oo hore loogu hanjabay in la dilayo, kadib markii uu Maxkamadeeyay kumanaan ka tirsan taageerayaasha Ururka Ikhwaanul Muslimiin
Mr Barakat ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi sanadkii 2013 uu xukumayay xubno oo Islaamiyiinta ka mid ah.
Weerarkan ayaa noqonaya isku daygii u horeeyay ee Xeer Ilaaliyha uu ka bad baado, tan iyo intii ay sii kordhayeen hanjabaadaha loo jeedinayay
Dalka Masar ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro argagixiso, waxaana dowladda uu hogaamiyo Al-Sisi ay wacad ku martay inay bur burineyso Kooxaha Argagixisada.
Wasiirada Caafimaadka Drs. Xaawo OO MAANTA gaartey Magaalada CADAADO isla markaana deeq DAAWO ah gaarsiisey isbitaalka GUUD EE degmada CADAADO
Juunyo 28, 2015
WAAJIDPRESS – 28 JUN 2015:
Wasiirada Caafimaadka dowlada FEDERAALKA Drs. Xaawo Xassan Maxamed “Lahelow” – (OO ka soo JEEDA BEELWEYNTA DIGIL IYO MIRIFLE), Ayaa MAANTA gaartey Magaalada CADAADO, isla markaana gaarsiisey deeq DAAWO ah.
Deeqdan Dawada ah oo gaaraysa ilaa 160-kartoon oo nuucyo kala duwan ah ayaa Wasiiradda caafimaadka dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed waxa ay ku wareejisay maamulka Isbitalka dhexe ee degmada Cadaado, iyadoo ay goob joog ka ahaayeen wasiirka arrimaha bulshada Ximan iyo Xeeb, iyo xoghayaha caafimaadka maamulkaas.
Agaasimaha guud ee Isbitalka Dr Maxamed Cumar Yuusuf ayaa sheegay in dawadan ay ku soo aaday waqti Isbitalka dawa yari ka jirtay, isagoo xusay in 25-sano ka dib Xaawa ay noqotay wasiiraddii caafimaadka ee Isbitalkan kaalmo keenta.
Dr Maxamed ayaa intaa ku daray in deeqdan dawada ah ay kaga farxad badantahay dawooyinkii ay ka heli jireen Hay’adaha marka la eego xagga tayada iyo tiradaba.
Wasiirka arrimaha bulshada Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye ayaa ka mahadceliyay kaalmada dawada ah ee maanta wasaaradda caafimaadku soo gaarsiisay, waxaana u sheegay in kaalmadan ay wax ka taridoonto baahiyaha caafimaadka deegaanka.
Wasiirada caafimaadka ayaa kormeertay qaybaha uu ka koobanyahay Isbitalka Cadaado, sida qaybaha bukaan jiifka, Qaybaha Carruurta iyo Haweenka, iyadoo sheegtay in wasaaraddu ay wado qoryaal lagu hormarinayo adeegga caafimaadka gobolada dalka.
Wasiiradda caafimaadka Xaawo Xasan Maxamed ayaa shalay gaartay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
War deg deg ah: sawiro: Banaanbax looga soo horjeedo Madaxda Dowladda iyo dhismaha Maamulka Galmudug oo Garoowe ka dhacay
Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal, maanta oo Axad ah waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo dhismaha Maamulka Galmudug iyo sidoo kale taageerada Dowladda Federalka Somalia ay u muujiyaan dhismaha Maamulkaasi.
Shacab kala duwan ayaa isugu baxay fagaaraha Baraxda ee Magaalada Garoowe, halkaasi oo uu banaanbaxa ka qabsoomay, waxaana dadkii isugu yimid halkaasi la hadlay Guddoomiyaha Gobolka Nugaal iyo Duqa Magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha Gobalka Nugaal Cabdilaahi Ciise Axmed ayaa sheegay inay tahay wax lala yaabo in madaxda Dowladda Federaalka Somalia ay taageeraan maamul ka hor imaanaya Dastuurka KMG ah ee dalka.
Waxa uu sheegay howsha Cadaado ka socotaa ay ku kooban tahay Galmudug iyo Galgaduud, wuxuuna Guddoomiyaha sheegay inaysan aqbali doonin cid kasta oo Dastuurka dalka jabisa.
Duqa Garowe Axmed Siciid Geelle , waxa uu dhankiisa sheegay in shacabka Banaanbaxa maanta isugu soo baxay ay isugu yimaadeen shacabka ayna muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay kaga xun yihiin Maamulkaasi.
Dadka ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin Qaran Dumis Jawaari iyo Qabiil Doono Xasan Shiikh Maxamuud ku soo bandhigay Banaanbaxa waxayna sheegeen in madaxda Puntland looga baahan yahay inay tilaabo muuqata ka qaadato arrinta taagan.
Banaanbaxaan ayaa ku soo aadaya, xilli shalay Magaalada Cadaado lagu doortay Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, bisha soo socota afarteedana la dooranayo Madaxweynaha maamulkaasi.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2015.